#JawaarMuhaammad maaliif dhugaaf jedhee dhugaa hin hojjetu?
By: Chali Ensermu
#JawaarMahaammad yeroo ammaa kanatti “ijoollee” jala yaatu kana waliin maal hojjechaa jiru? Jedhee Oromoon wal gaafachaa akka jiruufi yeroo kanatti gama isaanitiin deebiin tokkollee akka hin jirreefi deebii laachuus akka hin barbaanne muuxannoo kora DC(OLC) irraa hubannee jirra.
Akka ka’umsaatti ani mataa kiyyaan bakka sanitti qaaman argamee,
1.Mee qabsoon gama sabaahimaaleen gaggeeffamuufi kan Rogaalessummaa(Activist) jedhamuun deemamu kun saba Oromoo gara bilisummaatti ceesisuu ni danda’aa? Yoo kun hin danda’amne ta’e ammo dhaaba tokkotti makamtee,ykn dhaaba mataa keetii dhaabbattee(Kunillee filannoo miti) sabicha maaliif gara cehumsa tokkootti hoofuutti hin fuulleffanne?
2.Dhaabbilee jiran kana walitti fiduuf gaheen OMN kan hawaasni Oromoo bifa tokkoon gaafatuufi kan fedhii isaanii yeroo hundaa ta’e kun maaliif hin yaalamu?
3.Ijoollee roga tokkotti qindeessanii dhaaba tokkorratti holola hoofsisuun kun yoo dhaabbachuu baate balaan inni duree qabsoo Oromootirratti qabuufi jeequmsi inni biyya keessatti fidu maaf ilaalcha keessa galuu dide? Kkf akka yaada ka’umsaatti dhiyaatefii deebii kennuurra haguuganii irra darbuun filannoo ta’uun isaa Oromoodhaf ifa ta’uun dirqama yeroon gaafatuudha.
Asirratti Jawaar Mohaammad, Eeliyaas Ibsaa, Iske’eel Gabbisaa, fi Birhaanuu Dirbaabaa adda dureedhan Juuneddii Saaddoo akka gorsaa olaanaatti hojiin isaan saba Oromoo irratti hojjechaa jiraniifi hojjisiisaa jiran kun saba Oromootiif bu’aa moo dhiibbaa qaba kan jedhu gadi fageessinee ilaaluu qabna.
Akka nama dhuunfaattifi akka isa dhimmi oromoo na galcha jedhu tokkootti hojiin sabquunnamtii yoo qabsoo afaan qawweettin hin deeggaramne oduu qofa ta’ee akka hafu muuxannoo warra Kurdootaa akka fakkeenyaatti kaasnee ilaaluun barbaachisaadha. Qabsoon Kurdootaa erga Abdallaa Ochaalaa dhabamsiifamee achumaan cabbie aduun itti bahe ta’ee baqe. Kunis hidhannoon waan hin deeggaramneef malee waan biraa ta’ee miti. Gama sabquunnamtii hawaasatiin ammallee itti jiru; garuu tarkaaniifn isaanii duratti odoo hin taane duubatti.
Wanti amma jawaariifi “Ijoolleen” isa jala yaa’aa jiran kun gochaa jiranillee waan san darbuu miti. Isaan keessoo isaaniitti kaayyoofi galma mataa isaaniit qabu. Sabni Oromoo ammo waan san irratti waan hubate natti hin fakkaatu. Dhugaan saba kanaa yoo badu ammoo Oromoon kamiyyuu dammaqee eeggachuu qaba jedheen amana.
Jawaar yoo dhuguma qabsoof kan adeemu ta’eefi qabsoon isaa kunis sabicha galma Bilisummaatin gahuuf yoo ta’e maaliif qabsoo hidhannoo hin deeggarre ? Qabsoon hidhannoo sun ammoo eessa jira? Kan jedhu mee walgaafadhaa!
Dhugaan jiru kana; qabsoon hidhannoo kan jiru ABO harka.Tole dhaabicha maaliif jibba? Dhaabni kun kan Oromootii miti moo? Oromoon itti dhiigee, itti du’ee, itti naaffatee, itti cabee…waan hundafi waan hinjirre itti ta’eera. Eegas dhaabicha maaliif jibbaree? Kaayyoon dhaabichaa dogongora jedheet amanaa? Yoo dogongora ta’e maaliif sabicha itti hirmaachisee sirreessuuf adeemurra dhiisee jigsuuf fiiga? Dhaabni kun jiguun Oromoof hiika maalii qaba? Mee yaa saba keenya waan kana sirriitti qalbeeffadhaa!
ABO keessa namni badii balleesse yoo jiraate san sabatuu dhugeeffatee adabbiifi qeeqa barbaachisu itti laattatee sadarkaa gara biraatti ceesifata malee namni dhuunfaa akkamiin ka’ee dhaabichi jiguu qaba jedhee murtoo sammuu saba bal’aa kana takkaatti laamshessu murteessa? Kun gadda sabni Oromoo inni ilmaa ilmii ofii itti gabbare ofkeessatti rirriittachaa jiruudha!
DHugaa kanarraa maquun takkaa hin danda’amu. DHugaan yoo kana ta’e qabsoo saba kanaatti gurbaan kun bishaan naqaa jira moo guddisaa jira? Yaa sabaa waan kee sumatu tikfachuu qaba. Jarri kun dhuunfadhaan daldalachaa jiru malee sabichaaf waan tokko hojjechaa hin jiru. Kana ammo ani dhuunfadhaan jibba irraa qabaadhee odoo hin taane waan inni harka wayyaa jalaatiin hojjechaa jiru dhiyeenyatti waanin beekufan jedha.
Namoota akka Chaffee Raammis, Angaasaa Ibraahin, Naazir Haadha Nuuraa, Ali Mohammed fi kkf … hunda kan jabaadhaa jedheenii dhaaba ABO irrattii bobbaasufi kan waan isaan feedhan maraan isaan deeggaraa jiru isa. Tole kun yaa ta’u yeroo kana godhan kana waan kanatti kan fayyadamaa jiru eenyu? TPLF/OPDO dha. Tole badiin fedheeyyuu yaa jiraatu gadi bahanii dhaabichaafi waan soba dhaabicharratti hololan kana sabaa himaaleen diddiguun kun yoo kan itti fufu ta’e tokkummaan isaan faarsaa ittiin saba kana gowwoomsaa jiran kun eessaa garamitti adeemaa jira? Dhugaa dubbachuuf tokkummaan isaan faarsan kun tokkummaa ganda isaan itti dhalataniitimoo kan saba kana guutuu walitti fidu jechuun ammo barbaachisaadha!
Tokkummaa ganda tokkoo fiduuf kan deeman ta’uu abbaan itti dhiyeenyaan waan isaanii kana ilaaleefi hubate sirriin beeka.Tokkummaa ganda tokkoot fidna jedhanii ammoo kan saba bal’aa kana addaan diiguun waan bishaankaasu natty hin fakkaatu. Faayidaa isaatirras miidhaan isaa heddummaachuun hin oolu.
Dhiibbaan warra murna muraasaan adeemanii maal akka ta’e seenaa warra Jewishootaa kan bara 1940 keessaafi waan Hitlar isaanirratti dalage beekuun gahaadha. Saba bal’aa kana keessaa ganda tokkicha qofa adda baasanii bilisoomsuus ta’ee ijaaruun kun sabicha kophaatti guduruu siyaasa (Political diction)saba sanii gochuuf adeemuu ta’a. Kun odoo hin beekin gandichumaayyuu miidhaa biraa keessa galcha. Akka dhuunfaatti nama kana godhu san ni fayyada; Jawaar jechuudha. Isaaf namooma dhuunfaa (Personality cult” isaa dagaagsufi mala. Kanaan ammoo inni qabeenyafi maqaa horata yaa jennu. Dhumni adeemsa kanaa garuu bareedaa miti. Ani yoon du’e saardoon…akka jette saniif yoo ta’e rakkoon gurra abbaatti.
Asirratti wanti ifa ta’uu qabu yoo gareen wal ijaaranii gara tokkotti bobba’uun kun adeemsa filatamaa ta’e tokkummaan jedhamu sun abjuu ta’a. Nutis, “Firri gara firaa,Harreen gara daaraa”kan jedhu sanitti deemuun keenya dirqama. Kana taanan ammoo adeemsa qabsoo bilisummaa gochaa jirruufi kan itti deemnu keessatti gufuu diinni nutty ta’u caalaa kan waliin walitti taanutu danata jechuudha. Yaa saba Oromoo waan kana maaliif callifnee ilaalla? Gaaffiin keenya ifaan, deebiin isaatiis ifaan deebi’uu qaba!
Dhugaa yoo dubbanne waan fedheenuu madaalamu, akka fedheenuu dubbatamu ABO deeggaraa hin dhabu, akka amma adeemamu kanatti ammoo walitti deemurra addaan deemuun adii ta’aa deemaa jira. Gurbaa kana ifaan gorfadhaa!
Toole qabxiin arma olitti kaase kun hin taaneef jennee yaa fudhannummoo!
Yoo lakkiin karaan kiyya kan biraatii jedhee kan didu ta’e dhaaba keessa jiru, akeeka dhaaba isaafi sagantaa siyaasa dhaaba inni deeggaruu saba kanaaf ifa godhee gama barbaachisuun utubamee qabsoon keenya gama tokkotti cehuu qaba. Haala amma deemaa jiruun dhaabota ABO jibbaniifi isaan morman qofa irra deemee harka wayaa jalaatiin deeggaruufi itti fakkeessuun kun qofti nu hin baasu. Kun Oromoodhaaf hojjechuu otoo hin taane Oromoorratti hojjechuudha.
Ifaan ifatti dhabni kiyya kana, adeemsifi karoorri kiyya kana, isa kanatuu saba kiyyaaaf ta’a jedhee as bahuu qaba. Inni amma ittiin adeemamaa jiru kun hundi hoo’isanii(Sensational) gochuudhan daldaluu malee takka wanti adeemame hin jiru.
Yeroo darbe kana keessatti walgahiin Oggantoota Oromoo(OLC) jedhamee Atilaantaatti walgahamee wanti jedhamee bahame ABO arrabsuufi deeggrtootafi miseensota dhaaba kanaa hunda bakka tokkotti gatii dhabsiisuufi dallansiisuun xumuurame. Haaluma kanaan washiingitan DC tti walgahamee dhaabbata gargaarsa namummaa HIRPHAA INTERNATIONAL jedhamu dhaabnee bane jedhan. Kun waan gaariillee ta’u qabsoof homaa bu’aa hin buusu. Dhugaa dubbachuuf dhaaba gargaarsa namummaa dhaabuuf namoonni sadarkaa hooggansaatti walgahuu qabu kan jedhu yaaduun salphina. Nama gargaaruuf namoomni qofti gahaadha. Namni tokko deeggartoota isaa walitti qabatee waan salphaatti dhaabudha. Kaayyoon isaas namoota biyya keessa jiru gargaarra jechuudhan qaamolee dhaabbata idil addunyaa kan biroorraa maallaqa walitti qabachuuf malee wanti qabsoo Oromootiif buusu sharfeen tokkollee hin jiru. Dhaabbanni akkanaa kan maqaa Oromootiin dhaabbatan hedduutu jiru. ORA, HUNDE grass Root…kanneen jajjabeessuun gargaarsa saniif gahaadha. Dirqama maqaa kiyyaan dhaabbachuu qaba namni jedhu yoo jiraate ammoo kun akkan arma olitti kaase san “cult building” malee qabsoo miti.
Kanaaf dhaaba deeggaruun as bahuun dirqama. Kana kanin jedheef itti gaafatamummaa fudhatee hojiifi gahee isaa akka bahuufi malee inaaffaa miti. Yoo kana hin taane dubbiin gurbaan kun OPDO dhaf hojjeta jedhamu kun dhugaa ta’a. Sababni isaa waan inni hojjechaa jiru namuu akka hin beeknefi waan irra gahe akka itti hingaafatamneef dhoksee jara waliin hojjechaa jira jechuudha.
Asirratti dhugaan tokko beekkamuu qaba. Namoonni inni faana socha’u kan akka Isqi’eel Gabbisaa, Eeliyaas Ibsaa, Hayiluu Dirbaabaa…hundi warra biyya keessa torbaniin deddeebi’aniifi warra omishaa adda addaa qabaniidha. Darbees ammoo jarri kun warra biyya keessatti qacaramuufillee qaama mootummaa TPLF gaaffii dhiyeessanii turan. Eeliyaas Ibsaa yeroo ammaa kanatti karaa obboleessa isaa Mahaammad Ibsaa nama daldala ‘import/export’ irratti gahee guddaa taphatuufi nama keessummoota OPDO USA keessatti simatee qubsiisudha. Isqi’eel Gabbisaa waan inni Finfinneefi Yunivarsitii Wallaggaa keessatti godhe namiyyuu ni yaadata. Birhaanuu Dirbabaa ergama wayyaaneen ittiin ABO hanga ammaatti himachaa jirtu, waa’ee Hinquuftuu nama qondaalummaan hojjete ta’uun isaa ni beekkama. Kanaa olitti ammoo Juneeddii Saaddoo namni dhiiga ilmaan Oromootin dhiqate har’a goota jedhamee Jawaariin faarfamuun kun hundaafuu qaaniifi caba walii galaati. Kun mamiifi Shakkii Jawaar OPDO dha jedhu san daraan mirkaneessa.
Yaa Oromoo waan goonufi gara itti deemnu ifaan beekuun dirqma .Akkatti bane beekuun akkatti gallu beekufis daandii nuuf hara. Saba Oromoo hundaayyuu waanin gaafadhu yoo jiraate qabsoo keenyarratti qoosaan qoosamaa jiru kun tokkoon tokkoo lubbuu saba keenyatirratti qoosamaa jiraachuun nutty dhagahamuu qaba. Dhumaratti wantin jedhu waan goonufi maalif akka goonu dura ofuma yaa gaafannu!
Amalaaf maalin daabboo arraabdi jedhan.
Jalqaba bara 2005 yeroo inni Eeshiyaadhaa gara USA deemu irraa eegalee hojiin Jawaar Muhaammad akkatti hawaasa Ooromoo bakka jiran maratti adda facaasuun gidduu garaagarummaa naqee ofii isaatiif qofa fayyadamu irratti xiyyeeffataa akka ture waanin beekurraa kunooti.
Ka’umsa gaafa inni barataa kutaa 9ffaafi kurnaffaa turee eegalee akka ergamaa Wayyaaneetti tajaajilaa akka ture ragaa hedduun tureera. Namni kun Eeshiyaatti barateef haalduree ta’uun Juneddiin akka itti amanee alatti isa erguuf ka’umsa ta’eef. Juneddiin dhimma kana afaansaan kan dubbate yoo ta’u, Jawwaaris kana amanee jira. Gurbaan kun bara sanitti walgahii barattoonni mana barumsaa isaa godhanirratti namoota kan biroo sadi waliin sagalee akka dhageechisaniif filatamee jalqaba ergama itti laatame dhugumaayyuu sagalee san dhageechisuun gahee isaa hiriyoota isaa waliin bahatee ture. Akka basaatummaattis wayyaanee tajaajilaa tureera. Yaa ta’u malee erga walgahiin xumuramee amala hattummaafi gantummaa qabu sanirraa kan ka’e ijoollee isa waliin turaniifi kaanillee ganuudhan warra walgahii teechisaa turan(OPDO) sanneen bira dhaquun hiriyoota isaa saaxilee ofii isaatiif isaanitti maxxanee barnoota san argachuun wayyaaneen biyya alaatti ergite. Jawaar qabxii guddaa qabaatee utuu hintaane waan ergama kana galmaan ga’uuf ajja fudhate qofaafidha.
Dubbiin dhaabbilee Oromoo diiguuf fiiguu kun achii eegala. Har’as kanaaf hojiisaa adda duree godhatee namoota dhaloota naannoosaa kumaa ol ta’an miidiyaarratti ijaarratee ittiin dhaabbilee Oromoo diigaa jira. Haala saniin gaafa Ameerikaa dhaqullee ergama san bakkaan gahuufi harcaatuu OPDO biyya alaa keessaa wacaa jirtu bira dhaquun isaan waliin ta’ee waan Oromoo fakkaatu mara itti seenuun jaarmayaalee Oromootti dhuufuu curree dhuufuu eegale. Jalqaba akkuma USA seeneen naannoo Losaanjalas LA jedhamu kanatti Oromummaa isaatiin Oromoonni qubachiisanii erga tajaajilaa turanii ergama isaa waan beekuuf ariitidhaan gara Minesotaa qajeele.
Achitti dargaggoonni Oromoo idil Addunyaa hundooftee sochii gaarirra waan turteef xiyyeeffannaan isaa isaan mooquun jigsee waan harka isaanii saamee kutuu ture. Sanas godheera.
Wantichi akkana: Bara 2006 dargaggoonni Oromoo idil Addunyaa achi turte sun sochiifi gurmii jabaa qabaachaa waan turteef koreen hundooftee filannoo akka gaggeessan taasifame. Koree san keessatti warreen kanneen akka:
2.Arfaasee Gammadaa(Haadha warraa isaa kan ammaa)
5. Jawaar Muhaammad galan.
Ijaa ergama qabuuf koree kan keessatti namiyyuu odoo isa hin filin teessoo dura taa’aa ofumaa fudhachuun Arfaasee ammoo maallaqa qabduu taasise. Dubbiin keessa hidhata addaatti deemaa jirtii beekaa! Achiin kutaa biyyattii Ameerikaa adda addaa irra naanna’uun hawaasa dammaqsanii maallaqa walitti qabuun eegalamte.Yeroo kana warreen koree kana keessa turan waan irraa quba qaban tokkollee hin qaban. Yaa ta’u malee inni naannoo Losaanjalas irraa, Arfaaseen ammoo Minesotaa irraa waan jiru waliif himaatii hawaasicha waliin dhahuu eegalana.
Kana keessa CD Dabbasoo Guyyoo (Argaa dhageettii Oromoo) ofumaa maxxansiisani gurgurachuutti ka’an. Kunis galii, waa guddaa galcheefira. Yeroo sanitti Arfaaseen Mineesotaa turte. Inni ammo Losaanjalas irraa waliif basaasaa diigumsatti gadi taa’an. Adeemsi Adda bilisummaa Oromoo dabalatee dhaabbilee maqaa Oromootin dhaabbatan hundumaa diiguuf fiiguun achirraa kan eegale yemmuu ta’u, ulaa bara sanitti argame maratti fayyadamuudhan garaagarummaafi hamii ilmaan Oromoo gidduutti heddummeesse. Jawar dhaabbiileewwan dargaggoonni (qeerroofi Qarreen) oromoo ittiin qabuuf maqaa waldaa dargaggoota Addunyaa (International Youth Association) jedhamuun as ba’e. Tarsiimoo sanatti gargaaramees diigamsa hedduu dalagee jira. Maqaa sanaanis maallaqa sassaabuutti gadi taa’e.
Maallaqa maqaa dargaggeeyyii Oromootin guurrame hunda isaatuu asbuutee isaa odoo hin mul’isin fudhatee barnootaaf gara London imale. Maallaqa miliyoonotatti tilaamamuus saamee badeera. Gara biyya keessattis daldala/business eegale qaba ture. Achitti waggaa tokko erga qara’ee booddee gaafa walgahiin gahu dhufee haasa’an taasisa jennaan ijoollee fuula itti guuran. Kana qabata godhateetu waan silaa garaa isaa keessa jiru baasee waldaan sun diigamuu isaa itti muddee akkasiin gurmuun sun maqaa isaatiin diigame. Bara 2008 irraa eegaluun murni Adda Bilisummaa Oromootirraa maqaa Jijjiiramaatiin fottoqee bahe sun %100 kan tumsamaafi gorfamaa ture tokko Jawaar Muhaammadiini. Jawaar yeroo sanitti maqaa ganda isaanitiin NUUREE DADDAFOO gorsaatii, maallaqaan ammoo Dr. Guddataa Hiikaa isaan deeggaraatii sadarkaa badii hammana hin jedhamne dhaaba Uummata Oromoo hangafticharratti raawwatan. Jawwaariif diinni diina caala Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Dawud Ibsaatiin durfamudha. Dhabni kun Oromoo ona hundaa akka bakka bu’ee jiruufi uummanni oromoo kutaa hunda keessa jiran akka keessatti qooda fudhataa jiran innillee numa beeka.
Bara san namoonni akka:
7.Jawaar Muhammad mana Dr. Guddataa Hiikaatti iccitiidhan
walgahuudhan haala ittiin aangoo bulchiinsa ABO ganda isaanititti naannessan mari’atan. Hassan Huseen akka dura taa’aa ta’u, yoo milkaa’uu baatan ammoo akkatti dhaabicha yeroo dhumaatiif diiganii barbadeessanirratti dubbatanii adda bahan. Akkuma isaan jedhanuuyyuu wantichi waan hin milkoofnef, (Hassan Huseen ulaagaa guutuu waan dadhabeef filatamuu hin dandeenye). Haata’u malee hojiin dhaaba diiguu baldhinaan itti fufe. Gocha isaanii kanaaf ammoo gahee sibilaa kan fudhate Jawaar Muhaammad ture. Jawaris gaafa Sanaa ka’ee dhaaba kanarratti xiyyeeffatee duuguudaaf waadaa seenee deggartoota maallaqaan isa duuba dhaabatan hedduu qabatee bobba’e. Sanatti aansuun Dr. Guddataa Hiikaa baasii hundaa danda’uudhan Jawaar barreeffamoota gama kanaan barbaachisu mara akka qopheessuufi gurmuu hawaasaa kamirrattuu deemee akka dubbatuuf haala mijeessaniif. Oromoon gara qulqullummaan waan gurbaan kun godhu hunda harka dhawaatifii ture. Ammas itti jira. “yaa gowwaa si duubni boowwaa!” akka jedhan san ammallee harka dhahaafitii jira.
Jawaar wantoota karoorfameefi hojiitti akka hiiku qajeelfame keessa inni guddaan hawaasni kun odoo hin beekinifi hin dammaqin akka bishaanii san kokkofalchiisaa akka nyaatu ture. Kun ammoo akka karoora isaanitti ta’uu kan danda’u alaabaa ABO qabatee faarsatti (Maqaa ABO garuu odoo hin dhahin) uummaticha sobee sossobee akka waan mana Dr. Guddataatti mari’atan san bakkaan gahu ture. Yeroo hedduutti Alaabaa ABO qabatee saba Oromoo biyya keessaafi ala jiran ittiin gowwoomseera. Qeerroofi Qarree Oromootiinis ani ABO dha jechuun odeeffannoo harkaa guuraa tureera. Kanaafis ragaa hedduutu jira. Alaabaa kana gargaaramee har’as maallaqa miliyoonota hedduutti tilmaaman OMN dawoo godhachuun walitti qabataa jira. Kunoo amma kan deemaa jiru isa! Kana baruufi hubachuuf dhagaa gurraachi nuti dhoofnu hin jiru-amman tana bakka deeme maratti alaabaan ABO harkaa hin bu’u; inni ammoo ABO abaaruu hin dhiisu. Barreeffama inni ABO baduu qaba jedhee ifaan gadi baasee maxxase ammaan tana laaluun raga jiraadha!
Haala kanaan erga milkiin argamee booddee dhaaba ganda isaan qabataniifi yaadanii deeman kanaa bakka bu’u ijaaruun karoora diigumsa ABO keessaa isa biraat ture. Inni sun dhaabbatee jira-KWO.Kanatti aansee wanti isaan ammas bara 2013 dhumarra mari’atanii horii guddaa itti baasuun sochiitti galan hanga danda’ametti Jawaar nama qaama kamiifuu hin baabsine godhanii mul’isuun saba Oromootitti hurrii maruudha.
Kanaaf yeroo ammaa kanatti kan inni miseensa qaama kamiituu odoo hin fakkaanne akka socha’u kan godhaniif. Yaa ta’u malee Jawaar amala isaatiin Jarjaraa gaanfa ciniinu waa ta’eef bara (2014?) dogongoree waan alaabaa KWO waan yaraa dubbate.
Achiin garuu deebiin jaraa waan hedduu birii dugdaa isa kutu waan ta’eef oggasuu deebi’ee dhiifama gaafate. Kunis Video san ilaaltanii waan dhugeeffachuu dandeechan waan ta’eef adiidha. Diigamuu ABOtti bifa kanaan odoo adeemaa jiranuu Dhaabbanni sabaa himaa OMN hundeeffamuun akkuma amala isaa san itti utaalee warra yaadicha kaases ta’ee warra adeemsa san keessatti qooda fudhachaa jiraniifi turan hunda akka ergama isaatti waliin dhahee kan muufachiisuun, kaan ammoo jalaa hatuun waan sanas hunda isaa too’ate. Kun ammoo diigumsa sila kaayyeffatanii ka’an sanaaf tumsa addaa ta’eef. Namoota “Oromo first” keessatti gahee guddaa taphachaa turan keessaa:
1.Urjii Sabaa (Nuujumaa Muhaammad)
2.Badrii Abdoo(Abbaa warraa Urjii)
4.Tigist Gammee….hundumaa akka itti tolutti suuta suutan dhabama godhe. Kan amma biratti hafte haadha warraa isaa Arfaasee duwwaadha. Nama yaada kana burqisiise Dr. Salamoon Ungashee akka hin eegamnetti itti yaadanii muufachiisanii akka inni gadhiisee deemu godhan. Warreen booddee achitti hojjechaa turan keessaa kan inni akka gadhiisu barbaadu garuu ammoo kan haala sodaatee teechisu Abdii Fiixee qofa.
Yaadan jalqabarra ka’an kan dhaabbilee Oromoo hunda diiguu jedhu saniin ka’uudhan yeroo darbe kana Kora hooggantoota Ooromoo (OLC) jechuudhan yeroo lama walitti qabee ture. Jalqaba yaaduma isaatuu kan hate yaada Proessor. Asaffaa Jaalataa waggoota 12 darban kanaaf buleetinoota adda addaa irratti barreessaa ture hatuuni. Kunis ammoo kaayyoo dhaabbilee gargaarsaa Oromoo miliqsuun hundumaa gama ofii isaaniitti naannessuun waan fedhan soranii baafachuuti. Yeroo darbe kana (March 10-12) Washingiton DC keessatti OLC jechuun walgahii godhatanii jiru. Wanti ittiin bahan garuu dhaabbata HIRPHAA international jedhamu dhaabuuni. Kun ammoo itti yaaddamee dhaabbata hangafa Oromoo Waldaa Maccaaf Tuulamaa akka jigu gochuuf kan wixinfameedha. Dhaabbileen Oromoo kan mirga dhala namaatiif mormaniifi kan namooman nama gargaaran hedduutu jiru. Isaan jajjabeessuurra isaan dhoqqee itti dibee kan inniifi fakkaattonni isaa hoogganan qofti dhaabbachuu qaba jechuun kaan jigsuuf arreeduun kun ijaara midhaan nyaatu isa taasisaa jira. Gurbaa kana hanga yonaatti namni odoo hin beekin faana deemee jira. Garuu hoggansi isaa mootii Jaldeessaa akka nutti ta’e amma reefu hubannus jalaa dhaabbannee ilaaluuf yeroon isaa hin darbine. Jawar yeroo ammaa kana abbootii Qabeenyaa Oromiyaa keessa jiraniifi aanga’oota OPDO olaanoo waliin akka hojjetaa jiru ragaan qabatamaan jira. Ergama Wayyaanee galmaan ga’uufis yeroo gara yerootti labsii sabboonummaa fakkaatu as biyya Amarikaa taa’ee achitti labsuun ilmaan Oromoo hedduu ficcisiiseera, abbootii qabeenyaa Oromoo hedduu saamsiseera, namoota baay’ees mana hidhaatti naqsiisee jira. Gocha sum’aa Jawar Mohamed dalage kana qofa miti. Gochasaa hammeenya kanarraa dafee hindeebi’u taanaan ammas tokko tokkoon ragaa walitti qabannee jirru gadi guuruuniifi miidiyaan saxiluun keenyaa itti fufa. Keessumattuu dhaaba sabni Oromoo gatii guddaa itti kaffale Adda Bilisummaa Oromoofi Qeerroo oromoorraa hindhaabatu yoo ta’e badiinsaa marti ifa ba’uuf jirti.
Injifannoon Uummata Oromoof! Oromiyaan Dhugaa ilmaansheefi Jabina Qeerrootiin nibilisoomti.
Odoo hin beekne maaliin nama nyaatti!?
Jawaar Mahaammad, Dr.Guddataa Hiikaa, Luba Dr.Gammachiisifi Luba Balaay Abbaa Duulaa gammadaa waliin akkatti firoomaniifi michummaan eessa akka gahee jiru!
Jalqaba michummaan Dr.Guddataa Hiikaafi kan Jawwar muhaammad kan jalqabe jibba ABO irraa qabanirraa madduu kutaa lammeessoo keessatti isinii eeren darbe. Jarreen hafan kaneenn waliin ammoo akkamitti akka michummaa soddummaa eegalan qabxiin jiru isaan armaan gadii kana.
Haala ittiin ABO jigsanirratti marii erga xumuranii booddee Dr.Guddataa Hiikaa kallattiidhan akkatti OPDO keessaa guddaafi furdaa isaa biyya Ameerikaatti argatee dubbisuufi akkamiin akka kaayyoo isaanii bakkaan gahuu danda’anirratti marii biraa taa’an. Barri isaa ammoo 2013 dhumarra ture. Sanatti aansee nama Abbaa Duulaa Gammadaa jedhamu ulaagaa Oromoon amaneera jedhuun erga buusanii baasanii mari’atanii booddee haala ittiin isatti dhiyeessanii yaada kana mirkaneessanirratti marii bal’aa godhan.
Tarsimoon inni guddaan isaan asitti baasan nama biyya Ameerikaafi Itoophiyaa gedduu deddeebi’ee namoota isaan barbaadan kana dubbisu iyyaafachuu ture. Haala kanaan kan filatamee ture Dr.Isqe’eel Gabbisaa ture. Yaa ta’u malee yeroo sanitti walitti dhufeenyi Dr.Isqe’eel Hawaasa biyya keessatiin qabu san hunda bishaan waa kaasu waan hin turreef ammas nama biraa iyyaafachuun dirqama itti ta’e. Haala kanaan namni yeroo sanitti argameef Luba Balaay jedhamuudha.(*Lub.Balaay jedhamu kun Balaay Mokonnin Jimaa miti) Lub Balaayi lallabaa Wangeela mana amantii Qaala Hiyoot kan ta’eefi yeroo sanitti waggaatti biyyatti yoo xiqqaate al afur nama deddeebi’aa tureedha. Lubichi haala san mijeessullee bifa isaan barbaachisuun xiyyeeffatee waan hin adeemnef nama biraa eeref. Namni kunis Luba Dr. Gammachiis Buubaati.Amma nama sirrii argatan. Gammachiis dhageettii qabu, beekumsa qabuufi investimantii (Lead star College) biyya keessaa qabu waliin wantoota walitti dabalatee kaadhimamuu Abbaa Duulaa dhugoomsef.(Keessa keessa Abbaa Duulaa Amantii Protestantii waan fudhatee jiruuf sababa manatti kadhachuufi jedhuun mana dhaqaa waan tureefi jiruuf) Haala kanaan Dr.Guddtaa hiikaa Abbaa duulaa LA tti eeggatee erga qeebalee booddee kallattiidhan Jawaar faana akka wal arganii mari’atan haala hunda aanjesseef. Kun itti fufuudhan hanaga hojjettoonni OMN dhangaa afaan abbaa duulaa keessa kaahaniifi garaa isaa guddaa sanitti lama lama ta’anii maramanii suura ka’uutti deemuu isaa hundatu yaadata. Abbaan duulaa marii waliin godhan keessatti kaayyoofi akeekni isaanii kan jalqabaa ABO jigsuu kan jedhurratti erga wal ta’anii booddee isaanif ammoo waadaa investimentii galeefii gara biyyaatti deebi’e. Kanumaan Dr.Guddataa Hiikaa baasii miiliyoona 3-4 biyya keessatti invetimentii eegale. (Kana suuraa isaa yeroo dhihootti isinii maxxansa). Dr.Gammachiis Buubaas oolmaa isaa kanaaf lafa koolleejjii Lead star irratti ijaare babal’isuuf akka tolu hanaga barbaade safaratee fudhachuun gamatti baasii mootummaatiin Leader ship irratti naanna’ee leenjii laata.
Kan biraa warreen gama mootummaa wayyaanetiin filatamanii ergamaniif MBA (Masters of business Admnistrationifi Leader ship tolaan digirii lammeessoo barsiisa) Keessahuu warreen dame tika wayyaanee keessaa dhufaniifi warra Oromiyaarratti hojii tikaa hojjetan, Kan waajjirri Abiyyi Ahimad hogganuuf barnoonni kun bash bash! (Waajjirri Abiyyi Ahmad kan maqaa dame saayinsiifi Teknolojii) jedhamu karaa laaftoo deemanirra Qeeraa(አረጋዊ ህንፃ) gubbaatti argama.
Haalli kun akkanaan mijannaan namoonni hunduu gama isaanitiin duula ABO dhabamsiifna jedhanii oliif gadi fiiguu eegalan.
Kaayyoniifi adeemsi asirratti saxaxame Jawaar geeddarumsa guddaa gama OPDOtin fidna jedhee hawaasa biyya alaa kana sobee,isaan biyya keessaa akka afanfaajjessuuf ture. Dubbii guddaan garuu odoo isaan itti hin yaadin amala jarjaraa Jawaar qaburraa gadi baate. Innis karaa namoota isaa gaafa OLC washingitan gaggeessuf deeman faranjoota waammatanii yeroo isaan fuulduratti achi bahan akka anqaaquu san harkaa basaq jette. Faranjootittiin “dhaaba qabduu?” yeroo jettuun lakkii nuti kanuma biyyaa san keessaa dhoohee yoo bahee nu bilisoomse malee hin qabnuu jedhanii dhugaa waggaa meeqa dhoksaan mari’achaa bahan tasa gadi baasan. Isaan guddadhaa jenneerra.
Asirratti hawaasni kan hubachuu qabu, “…nuti dhaaba hin qabnu” yeroo jedhanii deebisan faranjii gaddisiifachuufi moo sobuufi. Faranjoonni yoo gaddite, dhaqii dhaabbadhu qofa siin jetti; yoo sobuuf yaalte ABO isaan Jawaar dura beeku. Kun kallattiidhan kaayyoo OPDO faana jiraachufi ABO maqaa balleessuu jarattii qofa mul’isa.
Kan biraa ABO llee jibbee yoo kana jedhe maqaa Baqqalaa Garbaatin nagadaa bahee akkamitti OFC jiraachuu waakkate kan jedhu gaaffii namatti ta’uu qaba. Kunis gooftaa isaa OPDO gaddisiisuu dhiisuuf qofa kan godhe malee wallaalarraa kan madde akka hin taane hubachuuf jabaa miti.